Adeegyada OEM ee GMP Certified iyo Sare Nadiifinta Caafimaadka Cuntada Blueberry Ext. Softgel
[Kaydinta] 90pcs halkii dhalo, 150CC Dhalada Cad Ku hay qabow, qalalan, meel caddeyn iftiin leh, heerkulku waa 16ºC ilaa 30ºC, huurka: wuxuu ka hooseeyaa 70%
Blueberries waxaa ku jira nafaqooyin badan, gaar ahaan nafaqeeyayaalka yar yar iyo heerarka sare ee manganese, fiitamiinada B6, C, E, K iyo fiber. Waxay yihiin ilo qani ku ah antioxidants sida anthocyanins, flavonoids, beta-carotene, iyo phenolic xeryahooda ellagic acid. Kordhinta miraha loo yaqaan 'Blueberry supplement' waa kaabe nafaqo oo bixiya qiyaaso urursan oo nafaqooyinka ku jira buluugga. Blueberries waa warshad u dhalatay Waqooyiga Ameerika isla markaana isku qoys ah sida geedka canabka iyo biraha. Geedku wuxuu caan ku yahay miraha cufan, oo buluug dhalaalaya lehna dhadhan macaan oo macaan marka uu bislaado.
• Horumarinta caafimaadka aragga.
• Dheelitirka sonkorta dhiigga iyo ka hortagga cudurka macaanka
• Si wanaagsan waxtar ugu leh caafimaadka wadnaha
• Taageerida caafimaadka wadnaha
• Saamayn togan ku leh caafimaadka maskaxda, gaar ahaan xusuusta
• Xakamaynta miisaanka ma aha oo kaliya inay yareyso heerarka kalastarolka iyo triglyceride, laakiin sidoo kale waxay ka hortagtaa bilawga buurnida